कहाँ–कहाँ भण्डारण गरिँदै छ कोभिड भ्याक्सिन? कुन प्रदेशमा कति क्षमता? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कल्पना पौडेल शुक्रबार, माघ २, २०७७, ०६:३१:००
काठमाडौं - सरकारले फागुनसम्म कोभिड विरुद्वको भ्याक्सिन नेपाल आइपुग्ने संकेत दिएको छ। केही समयअघि स्वास्थ्य तथा जनसख्ंयामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले घुमाउरो पारामा यस्तो संकेत दिएका छन्।
यद्यपि, अझै पनि नेपालमा कुन देशको कुन कम्पनीको भ्याक्सिन आउँछ भन्ने टुंगो छैन। भारतको सिरम कम्पनीले बनाएको ‘कोभिसिल्ड', ‘कोभ्यासिन’ नेपाल ल्याउन पहल भने जोडतोडका साथ भइरहेको छ।
नेपालको भौतिक संरचना अनुसारको २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने र नेपालमा ल्याउन समेत सहज भएकाले भारतबाटै भ्याक्सिन ल्याउने पहल भइरहेको छ।
सरकारले २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने भ्याक्सिन ल्याउन सकेमा नेपालमा अहिले भएका कोल्डरुम नै काफी हुने बताएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केन्द्रमा भ्याक्सिन राख्ने क्षमता, भ्याक्सिन स्टोर र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भ्याक्सिन पुर्‍याउनका लागि रेफ्रिजेटर भ्यानको समेत तयारी गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाका आपूर्ति शाखा प्रमुख उपेन्द्र ढुंगानाले केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोरमा रहेका ९ वटा कोल्ड रुममध्ये २ वटा रुम कोभिड भ्याक्सिन भण्डारणका लागि तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिए।
हाल नेपालमा भएका भ्याक्सिन स्टोर क्षमता (२ देखि ८ डिग्री तापक्रम)
विमानस्थलको कोल्ड स्टोर प्रयोग हुने
स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको कोल्ड स्टोरलाई समेत कोभिड भ्याक्सिन भण्डारणका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ।
त्यसका लागि सम्झौता समेत भइसकेको छ। व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा भीमसिंह तिंकरीका अनुसार विमानस्थलमा रहेको कोल्ड रुम मर्मत गर्नुपर्ने छ। ‘अहिले करिब ८ लाख रुपैयाँ जति खर्च गर्नुपर्छ। त्यसलाई अहिले बनाएपछि कोभिड बाहेकको समयमा समेत प्रयोग गर्न मिल्छ,’ उनले भने। तिंकरीका अनुसार विमानस्थलको कोल्ड स्टोर मर्मत गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
पहिले बाहिरी मुकुकमा तरकारी, फलफूल र दूध लगायतका सामग्री स्टोर गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त कोल्ड स्टोर बनाइएको हो।
जनशक्ति थप गरिँदै
सरकारले कोभिड भ्याक्सिन भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि २० जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजना बनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा खोप सुपरभाइरसको अभाव नै छ। सोही अवस्था मध्यनजर गर्दै २० जना कर्मचारी थप गर्ने योजना रहेको छ। विभागले करारमा २० जना फर्मासिस्ट करारमा राख्नका लागि गाभीमा प्रपोजल समेत लेखेको छ।
त्यसबाहेक हरेक कोल्ड रुपमा रेफ्रिजेनेटर टेक्निसियन राख्नेबारे पनि तयारी गरिएको छ। बायोमेडिकल टेक्निसियन राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
खोप सुभरभाइजरहरु राख्ने तयारी पनि विभागले गरेको छ। भ्याक्सिन र कोल्ड चेनको व्यवस्थापन बाहेक भ्याक्सिन आएपछि भ्याक्सिन दिने जनशक्ति, त्यसको सूक्ष्म कार्ययोजना बनाउने तयारीमा पनि विभाग जुटेको छ।
आर्मीलाई भवन बनाउन दिइने
कोल्ड रुम नभएका स्थानमा भवन बनाउन आर्मीलाई दिने प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयबाट भवन बनाउने काम गर्दा टेन्डर गर्नुपर्ने र प्रक्रिया पनि लामो हुने भएकाले आर्मीलाई जिम्मेवार दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल कर्णाली र प्रदेश २ मा कोल्ड चेन नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सेनामार्फत निर्माण कार्य गर्न अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने बताइएको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ८१ संक्रमित थपिए, ४८ जना डिस्चार्ज ६ घण्टा पहिले
पर्सा : बर्थिङ सेन्टरको स्थापनापछि ग्रामीण महिला खुशी ८ घण्टा पहिले
कांग्रेस नेता जोशीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार १३ घण्टा पहिले